Knowledge – Page2– Maharmedianews
အပြစ်မရှိဘဲ သေဒဏ်ပေးခံခဲ့ရတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အသက်အငယ်ဆုံး ကလေးငယ်
November 11, 2019 admin555
George Stinny Jr. ( 1944 ) သူ့ကို လျှပ်စစ်ကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်ခိုင်းပြီး သေဒဏ်စီရင်တုန်းက သူ့အသက် ၁၄ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သေဒဏ်ပေးတဲ့နေ့ မတိုင်ခင်ရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်တိုင်း သူ့ လက်ထဲမှာ ကျမ်းစာအုပ်ကို ကိုင်ထား
အမျိုးသမီးတဦး လှဲအိပ်နေတဲ့ပုံစံ နဲ့ ဒွိုင်နန်းနွမ် တောင်တန်းက ကြေကွဲစရာ အချစ်ပုံပြင်
November 5, 2019 admin555
အမျိုးသမီးတဦး လှဲအိပ်နေတဲ့ပုံစံ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းရိုင်ပြည်နယ် မဲဆိုင်မြို့ အနီးက ဒွိုင်နန်းနွမ်တောင်တန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယိုးဒယားနဲ့ ဗမာ တွေဟာ ရှေးအခါ ကမူ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း မင်းဆက်ခေတ်က ယခု ဇင်းမယ် (ချင်းမိုင်) လင်ဇင်း (ချင်းရိုင်) ဒေသတွေဟာလည်း
“လူသိနည်းလှတဲ့ နန်းမတော်မယ်နု အုတ်ကျောင်းကြီး နှင့် ထူးခြားလှတဲ့ ရေကန်ကြီး”
October 27, 2019 admin555
လူသိနည်းသေးသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေဘိုခရိုင်၊ရေဦးမြို့နယ် မြင်းပေါက်ကျေးရွာမှာ တည်ရှိပါတယ်။ရွှေဘိုကနေ ၁နာရီကျော်ကျော်လောက်ကားမောင်းရတယ်။ရေဦးရောက်ရင် ရေဦးမီးပွိုင့်ကနေ အနောက်ဘက် သံသယ်လမ်းထွက်ကနေ ၅မိုင်လောက်သွားရတယ်။ မူးအကြီးတစ်ခုကိုကျော်ပြီးရင် လမ်းဘေး၌ မြင်းပေါက်ရွာဆိုတဲ့ ဆိုင်းပုဒ်ရှိတယ်။မြင်းပေါက်ရွာထဲကိုဝင်၍ လမ်းဆုံရောက်ရင် အရှေ့ဘက်ကိုသွားရပါတယ်။ပထမဦးဆုံး ရေကန်ကိုတွေ့ရပါမယ်။ ရေကန်ရဲ့ထူးခြားချက်မှာ ဘေးပတ်ပတ်လည် သစ်ပင်ရှိသော်လဲ
” ထူးခြားလှတဲ့ ကျိုက်ဒေးဝိဆံတော်ရှင်ရဲ့ နတ်ကျားအစောင့် နဲ့ ဘုရားလေးဆူ မီခဲ့သော ပတ္တမြား “
October 21, 2019 admin555
တချို့သော အဖြစ်အပျက်တွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ကူးယဉ်တာထက် ဆန်းကြယ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မမြင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ သာမန်အတွေးနဲ့ယုံကြည်လက်ခံဖို့ အတော်ခဲယဉ်းနေတတ်ပါတယ် ။ သုဝဏ္ဏ အားကစား ရုံတည်ဆောက်နေစဉ်ကာလနိုင်ငံခြားပညာရှင်တွေဟာ အားကစားဝင်းမှာစိုက်ပျိုးမယ့် မြက်အမျိုးအစားရှာဖွေဖို့ ပဲခူးဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ရာက အင်းတိုင်လမ်းဆုံမရောက်ခင် ပုံသဏ္ဌာန်ထူးခြားတဲ့ စေတီတော်တစ်ဆူကိုတွေ့တာနဲ့
October 18, 2019 admin555
ရှမျးပွညျနယျ လှိုငျလငျမွို့ အမှတျ(၁)ရပျကှကျ သီတာလမျး ရှိ ဂျေါရခါး လူမြိုး ဒျေါမီး နား အိမျ တှငျ ပငျလုံစာခြုပျခြုပျဆိုရနျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ဦးဆောငျ သော အဖှဲ့အား လှိုငျလငျမွို့မှ ပငျလုံမွို့သို့ လိုကျလံ ပို့ဆောငျ
“ထိုင်း သကြားလုံး စားမိလို့ အဖမ်းခံရတဲ့ ဖြိုး ပြည့် စုံ နဲ့ တ ရား ဥ ပ ဒေ စိုး မိုး ရေး “
October 10, 2019 October 10, 2019 admin555
( Zawgi version ) ဖြိုး ပြည့် စုံ ကို ဘယ် သူ တွေ ဖမ်း လိုက် တာ လဲ ။ နိမ့် ကျ တဲ့ ပ
စိုက်ပျိုးရင် တစ်ရာသီကို မြန်မာငွေသိန်းရာချီ ၀င်ငွေရနိုင်ပြီး စားသုံးရင် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တဲ့ ကြာစွယ်​ / ကြာမြစ်​
October 8, 2019 admin555
တစ်ရာသီကို မြန်မာငွေသိန်းရာချီ ၀င်ငွေရတဲ့ ကြာစွယ်​ / ကြာမြစ်​ Ref : China Plus ဘေကျင်း၊ စက်တင်ဘာ – ၂၂ ဆောင်းရာသီကို ၀င်လာပြီဆိုတာနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ကျန်းစီးပြည်နယ် မှ လယ်သမားများဟာ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း အင်းလေးရှိ ဖောင်တော်ဦး စေတီတော် သမိုင်း
October 7, 2019 admin555
(ရှမ်းပြည်နယ် – ညောင်ရွှေ မြို့နယ် – အင်းလေး ဒေသ နန်းဟူးရွာ တွင်သီတင်း သုံးတော်မူသော ဖောင်တော်ဦး မြတ်စွာဘုရား သမိုင်းအကျဉ်း) မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၄၇၃ – ခုနှစ်တွင်၊ ပုဂံနေပြည်တော်ကြီး တွင်၊
သာသနာတော်ထွန်းကားရာ၊ နတ်တို့ပျော်စံရာ ပုပ္ပားတောင်တော် သမိုင်း
October 6, 2019 October 6, 2019 admin555
အနောက်တိုင်းသားတို့က နတ်တို့ပျော်စံရာ အိုလံပတ်စ်တောင် (Mt. Olympus, an abode of the Gods ) နှင့်တူသည်ဟူ၍လည်းကောင်း အာရှတိုက်သားအချို့က ဖူဂျီတောင် (Mt. Fuji) နှင့်တူသည် ဟူ၍လည်း -ကောင်း တင်စား
ဝန်ထမ်းရှိတဲ့ မိသားစုတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ “မိသားစု ပင်စင်” အကြောင်း
October 5, 2019 admin555
ဝန်ထမ်းမိသားစုများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မိသားစုပင်စင်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာအချို့ပါ။ ပင်စင်စားတဦး ဆုံးသွားရင် ကျန်ရစ်သူတွေ ဆက်လက်ခံစားခွင့်ရှိတဲ့ မိသားစုပင်စင်ဆိုတာ… (၁) လုပ်သက် (၁)နှစ်အောက် = အကျိုးခံစားခွင့် မရှိ။ (၂) လုပ်သက် (၁)နှစ်မှ (၄)နှစ်အထိ =